MIBVUNZO - Nanchang Weiti Technology Co, Ltd.
Mitengo yedu inochinjika zvichienderana nekuwanikwa uye zvimwe zvinhu zvemusika. Isu tinokutumira iwe yakagadziridzwa yemutengo runyorwa mushure mekambani yako kutibata isu kuti uwane rumwe ruzivo.
Kune sampuli, iyo inotungamira nguva ingangoita mazuva manomwe. For vakawanda kugadzirwa, kutungamirira nguva mazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Nguva dzekutungamira dzinoshanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana yedu yekutungamira nguva isingashande neyako nguva yekupedzisira, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese, isu tichaedza kugadzirisa zvaunoda. Kazhinji, isu tinokwanisa kuzviita.
Hongu, isu tinogara tichishandisa yepamusoro-soro ekisipoti kurongedza. Isu tinoshandisawo hunyanzvi kurongedza zvinhu zvine njodzi uye yakasimbiswa inotonhorera yekuchengetedza vafambi yezvinhu zvinopisa-tembiricha. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kuunza imwezve muripo.
Mari yekutumira inoenderana nenzira yaunosarudza kuwana zvinhu. Express inowanzo kuve inokurumidza asi zvakare inodhura nzira. Negungwa ndiyo mhinduro yakanakisa yemari hombe. Mitengo yekutakura chaiyo tinogona kukupa chete kana isu tichiziva iwo huwandu hwehuremu, huremu uye nzira. Ndapota taura nesu kuti uwane mamwe mashoko.
Iwe unopa yakasarudzika yakavanzika chitaridzi sevhisi?
Hongu, tinogona kugadzirisa yako yakavanzika logo pane zvigadzirwa uye kurongedza. Iwe unongoda kuti utitumire yako logo mifananidzo.
Vatengesi ve Eyelash, Eyelash Kuwedzeredzwa, eyeliner, lipgloss, mink lashes, Ziso Lashes,